Jereo ny tsangambato tsara indrindra any Madrid | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | Tanànan'ny Espana, Madrid
Una Fitsidihana tena ilaina ny fitsidihana an'i Madrid, satria ny renivohitra dia manana fialamboly marobe sy zavatra maro ho hita. Amin'ity indray mitoraka ity dia hiresaka momba ireo tsangambato lehibe ao Madrid izahay, hahazoana hevitra momba izay rehetra azo tsidihina amin'ny fitsangatsanganana.
Na dia tsy ny tsangambato ihany no mahasarika antsika amin'ity tanàna ity, ny marina dia ampahany lehibe amin'ny fitsidihan'ny mpizahatany izy ireo. Misy toerana izay noho ny maha-zava-dehibe azy ireo cheverina ho tsangambato tena izy, noho izany hampiditra azy ireo ao anaty lisitra koa izahay.
1 Katedraly Almudena
2 Loharano Cibeles
5 El Retiro Park
6 Majistra Plaza
8 Tempolin'i Debod
Misongadina ao an-tanàna ny Katedraly Almudena na dia somary vaovao aza izy io, hatramin'ny nanombohan'ny fananganana azy tamin'ny taonjato faha-XNUMX. dia katedraly manana fomba neoclassical ivelany. Ao anatiny dia gaga amin'ny fomba neo-Gothic izay tsy maintsy hijanonanao mba hankafizanao ireo varavarankely fitaratra miloko marevaka. Azo atao ny mitsidika ny tranombakoka katedraly, izay ahitanao ny karazana pitsopitsony sy ny zavatra mifandraika amin'ny diosezin'i Madrid. Eo amin'ny fidirana ho an'ity tranombakoka ity dia manolotra ny mety hiakarany amin'ny dome hankafy ny fahitana ny tanàna ihany koa izy ireo. Misongadina ity katedraly ity satria tamin'ny 1993 dia natokin'i John Paul II izy, ary izy irery ihany no iray karazana tany ivelan'i Roma.
Ny Fuente de Cibeles dia miavaka indrindra amin'ny toerana misy azy ary satria lasa tandindon'ny tanàna izy io. Io no toerana alehan'ny Real Madrid mankalaza ny fandresen'izy ireo ary eo akaikin'ny Museum Prado, ao amin'ny faritra afovoany no misy azy. ny ny loharano dia tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary manodidina ny kianja dia misy tranobe mahaliana maromaro. Ny Palacio de Cibeles hatramin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX no biraon'ny paositra taloha fa ankehitriny kosa dia misy ny lapan'ny tanàna. Misongadina ny Bank of Spain, trano mijoalajoala ao anatiny izay ahitan'ireo mpanakanto manan-danja toa an'i Goya. Azonao atao koa ny mahita ny Palacio de Buenavista de los Duques de Alba sy ny Palacio de Linares.
Na dia tsy tsangambato fotsiny aza ity dia ny marina dia iray amin'ireo fitsidihana lehibe indrindra eto an-tanàna izy. Ny Prado Museum dia misy famoriam-bola lehibe ao anatiny, misy sombin-javatra manan-danja toy izany koa 'Las Meninas' avy amin'i Velázquez, Goya's '3 May 1808' or Rubens '' The Three Graces '. Afaka manao fitsidihana mitarika ianao ary mila mandany ora vitsivitsy, fara fahakeliny, hahitanao azy milamina.
Ny lapan'ny mpanjaka na Palacio de Oriente dia tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary io no toerana ofisialy ipetrahan'ny fianakavian'ny mpanjaka espaniola. Amin'izao fotoana izao dia toerana ampiasaina amin'ny fandraisam-bahiny sy hetsika izy io, satria ny fianakaviana dia mipetraka ao amin'ny Palacio de la Zarzuela. Mandritra ny fitsidihana dia afaka mahita toerana samihafa ianao toy ny efitrano ofisialy, ny fivarotam-panafody Royal na ny Royal Armory. Ny fanovana ny mpiambina dia atao amin'ny Alarobia manomboka amin'ny Oktobra ka hatramin'ny Jolay amin'ny 11 ora maraina.
Toerana iray hafa ity izay tsy tsangambato marina fa mila jerenao toa ny nisy azy io. Ity valan-javaboary lehibe ity dia manana faritra maro hita, toy ny dobo artifisialy izay hita avy any amin'ny Puerta de Alcalá malaza. ny Crystal Palace tamin'ny 1887 Iray hafa amin'ireo sary mahazatra an'io valan-javaboary io, izay misy fampiratiana vetivety. Ao amin'ny Paseo de la Argentina na Paseo de las Estatuas no ahitanao ireo sarivongana natokana ho an'ny mpanjaka rehetra.
Ny ben'ny tanàna Plaza dia eo akaikin'ny Puerta del Sol ary kianja mihidy sy misy arcade izy io ary hita any amin'ny tanàna hafa ny maodely. Eo amin'ny kianja dia ahitanao ny Sarivongan'i Felipe III na ny Casa de la Panadería, izay trano voalohany naorina. Toerana misy atmosfera be foana izy io ary mandritra ny Krismasy dia manana tsena lehibe izy ireo ahafahanao mividy zavatra isan-karazany.
Ny Puerta del Sol dia fantatra erak'izao tontolo izao noho izy toerana nandefasana ny feon-kira tamin'ny faran'ny taona. Izy io dia iray amin'ireo kianja malaza indrindra eto an-tanàna ary amin'ny manodidina azy dia hitantsika ny Paositra miaraka amin'ny famantaranandro. Tsy maintsy maka sary miaraka amin'ny sarivongan'i Bear sy Strawberry Tree na ilay dokambarotra angano an'i Tío Pepe, izay efa manintona mpizahatany hafa koa ianao.
Tsangambato ejiptiana iray ao afovoan'i Madrid no manaitra, saingy izany no ananantsika rehefa mitsidika ny Temple of Debod, izay hita ao amin'ny Plaza de España. Ity tempoly ity dia a fanomezana avy any egypta ho an'ny fiaraha-miasa amin'i Espana amin'ny famonjena ny tempolin'i Nubia. Roa arivo taona mahery ny tempoly ary nafindra vato avy tany Egypta.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Tsangambaton'i Madrid
Inona ny karatra London Pass ary aiza no hividianana azy?
Ny tempolin'i Angkor, gaga any Kambôdza